ပေကျင်း၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) မခန့်မှန်းနိုင်သည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက္ခဏာမပြသသည့်အတွက်ကြောင့် ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခသည် တတိယလသို့ ဆက်လက်ရောက်ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်၊ ရလာဒ်အနေဖြင့် ဥရောပသည် အကျပ်အတည်းကာလကို ဆိုးရွားစွာ ရင်ဆိုင်နေရသည်။(Xinhua) …………………………………………….. (English Version) How Russia-Ukraine conflict could affect Europe...
Environment, Disasters & Accidents6 days ago
ရန်ကုန်၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၌ ယနေ့ (မေ ၁၂ ရက်) မွန်းလွဲပိုင်းက ယာဉ်တိမ်းမှောက်ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါ လူ ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပလွေးအမြန်လမ်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ ” ခု နေပြည်တော် ကုတင် ၁၀၀၀ ဆေးရုံမှာ...
ပေကျင်း၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ငယ်စဉ်က စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်များကြောင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့သည့် လူငယ်တစ်ဦးသည် လက်ရှိတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြန်လည် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ Long Jieyong က ၎င်းငယ်စဉ်က ရရှိခဲ့သည့် မေတ္တာများနှင့် အထောက်အပံ့များကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုသူဖြစ်သည်။ ရာစုသစ်တွင် လူငယ်များက တာဝန်ကိုယ်စီလွှဲပြောင်းရယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း...
လာဆာ၊ မေ ၁၂ ရက် (ဆင်ဟွာ) ချိုမိုလန်းမားတောင် (ခေါ်) ဧဝရတ်တောင် ၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် မီတာ ၅,၂၀၀ အထက်ရှိအခြေစိုက်စခန်းများ၏ အခြေအနေ မည်သို့ရှိသည်နှင့်ထိုဒေသရှိ မိုဘိုင်းဖုန်းကွန်ရက်များအခြေအနေကို ဆင်ဟွာသတင်းထောက်ဖြစ်သူ Liu Ying က ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါသည်။ (Xinhua) ………………………………….. (English Version) GLOBALink...
Page 11 of 7266« First‹ Previous789101112131415Next ›Last »